Madaxweyne Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
10th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminaayo oo ay kamid yihiin Wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale ayaa duhurnimadii maanta gaaray magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusa Mareeb ee Ugaas Nuur waxaa si diiran u soo dhaweeyay mas’uuliyiin ay kamid yihiin Wasiiro dowlaha Arrimaha dibadda, Taliyaha hay’adda nabad sugidda, Guddoomiyaha gobolka Galgaduud iyo boqolaal kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Dhuusa Mareeb oo watay sawirka Madaxweynaha iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
U jeedada booqashada Madaxweynaha ee Dhuuas Mareeb ayaa ah in uu furo shirka dib u heshiisiinta Beelaha gobolada dhexe kaas oo mudooyinkii dambe qaban qaabadiisa ka socotay deegaanada gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Amaanka magaalada Dhuusa Mareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana halkaasi jooga cutubyo ka tirsan ciidanka hay’adda nabad sugidda Qaranka gaar ahaan ciidamada si gaar ka ah u tababaran ee Gaashaan kuwaas oo si weyn u sugaya amaanka Madaxweynaha iyo wafdigiisa.